Miketrika korontana eto amin’ny firenena: nilaza ny tsy hanaiky sahady voka-pifidianana ireo kandidà 25 | NewsMada
Miketrika korontana eto amin’ny firenena: nilaza ny tsy hanaiky sahady voka-pifidianana ireo kandidà 25
Efa tsy nahazaka olona nefa mbola miketrika ny hamboly korontana eto amin’ny firenena. « Na iza lany sy voafidy eo, tsy ekenay ny voka-pifidianana satria nofidina tamin’ny hosoka sy lisi-pifidianana tsy mandeha amin’ny laoniny. Manana porofo izahay ka ahoana ny hanekena izany fifidianana izany», hoy ireo kandidà, mitsipaka ny fifidianana, tetsy Mahamasina omaly. Notemerin’ny mpitandro filaminana marobe izy ireo tamin’izao hetsika izao. Nialohavan’ny fifampiresahana tamin’ny lehiben’ny Emmo/Reg izany hetsika izany. Vitsy ihany anefa ireo olona nihaino azy ireo.
Ankoatra izany, nilaza ny handeha hidina any amin’ny faritra izy ireo haneho izao tsy fankasitrahana sahady ny ho voka-pifidianana izao. Amin’ny ankapobeny, nilamina ny teny an-toerana.
Tsy tokony hiadian-kevitra intsony ny firosoana…
Araka izany, tsy ho afa-bela amin’ny korontana efa nambarany mialoha ireto kandidà ireto. Mamendrofendro vahoaka amin’ity fifidianana efa miroso ity. Mazava anefa fa efa namaly avokoa ireo rafitra misahana ny fifidianana, hatrany amin’ny sehatra iraisam-pirenena fa tsy azo ihodivirana ny hirosoana amin’ny fifidianana. Anisan’izany ny eo anivon’ny Vondrona eoropeanina (UE), ny Vondrona afrikanina (UA), ireo firenen-dehibe toa an’i Japon, Etazonia, Sina, Norvezy, Alemana…
Tokony hajaina ny lalàmpanorenana
Tokony hajaina ny voalazan’ny lalàna sy ny lalàmpanorenana, ny amin’ny tsy fahazoana mikitika intsony ny lisi-pifidianana. Itovian’izy ireo hevitra avokoa izany rehetra izany. Efa nitondra valin-kafatra rahateo ny mpikarakara sy ny mpanomana ny fifidianana. “Aoka tsy hanaovana resabe na iadian-kevitra intsony ny firosoana amin’ny fifidianana”, hoy ny filohan’ny Ceni, Rakotomanana Hery.